Imtixaanka Sanad Dugsiyeedka 2011, oo Degaanka Somalida ka Socda – Rasaasa News
Wasiirka waxbarshada ee dawlada degaanka Somalida Itobiya, ayaa sheegay in degaanka Somalida ay ku yaalaan 211 dugsi oo wax lagu barto, kuwaas oo 170 ka mid ah ay yihiin Dugsiyo H/dhexe, 41 ka mid ahna ay yihiin Dugsiyo Sare.
Tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka sanadkan fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 10aad ee dugsiyada sare ayuu wasiirku sheegay in ay dhantahay 16, 586 arday.
15,100 ka mid ah ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa waa dugsi dhexe, halka ay 1486 ka yihiin Dugsi sare.
In kasta oo uusan wasiirku soo saarin shaxda magacyada dugsiyada iyo degmooyinka ay ku yaalaan dugsiyada tiradaas leh, ayaa hadana waxaa muuqata in uu jiro isbadal waxbarsho oo aad u wanaagsan.
Waxaase aad looga dayriyaa in ay xuntahay tayada waxbarshada ee degaanka Somalida Ethiopia, taas oo laga garan karo tirada ardayda degaanka ee ku jira Jaamacada Addis Ababa.
Ethiopia waxaa ku yaala Jaamacado sharciyeysan oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo ay gali karto cid kasta oo iska bixin karta kharashka. Jaamacada Addis Ababa oo ay sumcadeedu aad u sarayso ayaa waxaa lagu galaa dhibco sare oo ku salaysan manhajka dalka u yaal.
Degaanada dalka oo dhan, ayaa waxay tacliinta ku bartaan afkooda, macalimiinta wax ka dhigaana waa kuwa ay tacliintoodu ku egg tahay degaankooda.
Degaanka Somalida Ethiopia ogaantay ma jiraan arday dibada ka hela deeq waxbarsho, marka laga reebo arday iyagu iskood u taga dalka Suudaan. Kuwaas oo kolka ay tacliinta soo dhamaystaan ee ay degaanka ku soo laabtaan lagu xidho helitaanka shaqooyinka aqoonta Afka Xabashiga.
Horumarka dal waxaa asal u ah waxbarashada, tacliintuna ma aha tii kugu kooban degaankaaga kaliya, waa in ay jirtaa mid caalami ah oo ay ardaydu ka heli karaan qaranka iyo qaaradaha.
Waa dhab in ay jirtay dhibaato ah i bixi soo noqon maayee, taas oo aan filaayo in ay haatan dhamaatay.
Sababta oo ah wiilka wax ku barta degaanka Somalida ee waliba hela shahaado dibadeed mushaarka uu qaato wuu ka badan yahay ruux kasta oo wax bartay oo qaxooti ah.
Shax kooban oo aan ka diyaarinay, Qoralkii wasiirka waxbarashada degaanku ku soo saaray bogga Cakaara, May 31, 2011